RASMI: Tiknolojiyadda VAR oo loo adeegsan doono Koobka Adduunka 2018 – Gool FM
(Zurich) 26 Abriil 2017 – Madaxwaynaha FIFA ee Gianni Infantino ayaa xaqiijiyay in tiknolojiyadda VAR (Video Assistant Referee) loo adeegsan doono Koobka Adduunka 2018 ee lagu qaban doono Russia.
Hannaankan muuqaalka taageeraya garsooraha ayaa wuxuu garsooraha ka caawin doonaa sixitaanka goolalka hobseedka ah, roosooyinka iyo laacibiinta la isku khaldo, iyadoo mararka qaar jaalle ama rooso loo wadey laacib mid kale la siiyo.
Hannaankan VAR ayaa marar badan tijaabo ahaan loogu adeegsadey Serie A oo ku dhawaaqay inay si rasmi ah u adeegsan doonaan fasalka soo socda ee 2017-18.
Waxaa sidoo kale lagu saxay laba go’aan kulankii sxbtinimo ee ay Spain ku garaacday Faransiiska bishii hore iyo Koobka adduunka naadiyada ee Club World Cup ee bishii Diseembar lagu qabtay Japan.
Horyaalka Australia ee A-League ayaa noqday horyaalkii ugu horreeyay ee heerka 1-aad ah ee VAR isticmaala bishan horraanteeda, iyadoo sidoo kale loo adeegsan doono koobka Qaaradaha xagaagan, oo ah tartan aalaaba loo arko mid la iskugu diyaarinayo KA.
''Waxaan rabaa inaan joogo AC Milan'' - Manuel Locatelli